Semalt 8 खतरनाक कालो ह्याट SEO प्रविधिको चेतावनी
SEO प्रविधीहरूले खोज इञ्जिनहरू द्वारा स्थापित नियमहरूको सेटको पालना गर्नुपर्दछ। जे होस्, त्यहाँ ती व्यक्तिहरू (स्प्यामरहरू) छन् जसले कुनाहरू काट्न मन पराउछन् उनीहरूको साइटहरूमा जैविक यातायात ल्याउन। तिनीहरू त्यसो गर्छन् साधारणतया कालो टोपीको रूपमा चिनिने अभ्यासहरूको साथ खोज इञ्जिनहरूले सेट गरेका नियमहरू भ breaking्ग गरेर।
माइकल ब्राउन, Semalt का एक शीर्ष पेशेवर, केहि परिभाषित गर्दछ तपाई सुरक्षित रहनका लागि:
१. भुक्तान गरिएका लिंकहरू
प्रयोगकर्ताहरूले लि on्कहरू किन्न कसरी जान्छन् जानकारीको आधारमा कि यसले कसरी लिन्छ, र ट्राफिकले यसलाई प्राप्त गर्दछ, उच्च क्रमबद्धता पनि प्राप्त गर्न। यो बाहिर लेन को लागी काफी सजिलो छ किनकि लि one्कको सामग्री गुणस्तरमा लेनदेन गर्नुपर्दैन किनकि तिनीहरू लेनदेनको माध्यमबाट हुन्छन्। साथै, गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले साइटलाई क्रमबद्ध गर्न एन्कर टेक्स्टमा भरपर्दछ, ग्राहकहरूले उनीहरूको प्राथमिकतामा आधारित एक खरीद गर्न रोज्न सक्दछन्।
२. स्पाम टिप्पणीहरू
तिनीहरूको उद्देश्य उद्देश्य स्प्यामरको साइटमा नि: शुल्क ब्याकलिink्क सिर्जना गर्नु हो र कुनै एसईओ फाइदाहरू प्रदान नगर्नुहोस्। क्वालिटी नियन्त्रण बिना खुला ब्लगहरू स्प्याम्मी टिप्पणीहरूको लागि सजिलो लक्ष्य हो। यसले साइट भ्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको साथ नकारात्मक प्रभाव छोड्छ, जसले उनीहरूको अनुभव कम गर्दछ। तिनीहरू त्यसपछि कुनै पनि बहुमूल्य टिप्पणीहरू छोड्न असमर्थ छन् किनकि ब्लग अव्यवसायिक वा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ।
D. सामग्री नक्कल
यो एक "प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्" प्रविधि धेरै डोमेनहरूमा समान देखिने सामग्री फैलाउन प्रयोग गरिन्छ। खोज ईन्जिनले अनुपम सामग्री मनपराउँदछ र नक्कल मात्र साइट को उच्च रैंकिंग को मौका चोट पुग्छ। प्रयोगकर्ताहरूले गुगल लिस्टिंगमा धेरै लिंकहरूमा समान सामग्री फेला पार्ने आशा गर्दैन। यसले तिनीहरूको अनुभव घटाउँछ किन त्यसैले यो कालो टोपीको रूपमा वर्गीकृत गर्दछ। नक्कल एकल डोमेनमा पनि देखा पर्न सक्छ। प्राय: जसो यो ज्ञानको अभावको कारणले हुन्छ। क्यानोनिकल ट्यागहरूले पोष्टको सक्कली संस्करणको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, अन्य प्रतिलिपिहरू गुगल क्रल बोटमा अदृश्य बनाउन।
Article. लेख स्पिनि।
यो नक्कलको एक रूप हो जहाँ मार्केटरहरू कागजातमा यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि परिवर्तन गर्दछन् यदि यो नयाँ वा अनौंठो हो भने चोरीको उपकरणलाई बाइपास गर्नका लागि। यो लोकप्रियता हासिल गर्दैछ, यसले साहित्य चोरी सामग्रीको प्रस fit्गमा फिट भए पनि।
Cloaking प्रयोगकर्तालाई सामग्री वा यूआरएलहरू डेलिभर गर्न प्रयोग गर्ने रणनीति हो जुन सर्च इञ्जिन स्पाइडर अनुक्रमणिका भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छ। यसले सर्च ईन्जिनलाई SERP मा उच्च श्रेणीमा राख्दछ जबकि भ्रमणकर्तालाई अप्रासंगिक जानकारी दिन्छ।
Do. डोरवे पृष्ठहरू
यी कीवर्ड-अप्टिमाइज ल्यान्डि land पृष्ठहरू हुन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई छनौट गरिएको नतिजाबाट असम्बन्धित जानकारीको साथ अर्को गन्तव्यमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। तिनीहरू विशिष्ट प्रश्नहरूको लागि उच्च श्रेणी निर्धारण मा ध्यान केन्द्रित।
Key. कीवर्ड स्टफिंग
यहाँ, वेबसाइट मालिकहरूले उनीहरूको सामग्रीलाई उच्च श्रेणीको किवर्डहरूको बहुमतको साथ SERP मा देख्न सकिने संभावनाहरू बढाउन भरिनेछ, फलस्वरूप सकेसम्म जैविक यातायात चलाइनेछ। यद्यपि, भरीएको कुञ्जी शब्दहरूले पोष्टहरूलाई अप्राकृतिक देखिन्छ र प्रयोगकर्ता मैत्री गर्दैन।
Inv. अदृश्य पाठ
विधिमा सेतो पृष्ठभूमिमा कुञ्जी शब्दहरूको सेट राख्नु, आगन्तुकलाई अदृश्य बनाउनु समावेश छ। यो केवल खोजी ईन्जिनहरू छन् कि फेला पार्न, क्रल गर्न र तिनीहरूलाई सूचकांकमा प्राप्त गर्न।
व्यक्तिहरू कालो टोपी प्रविधिको प्रयोग गर्नेले तिनीहरूसँग सम्बन्धित उच्च जोखिमलाई बेवास्ता गर्दछ किनकि उनीहरू जे भए पनि पत्ता लगाइन्छन्। यो दण्डहरु मा परिणाम, वा खराब स्थिति मा, खोज इञ्जिनहरु SERP मा देखा पर्न साइट प्रतिबन्ध लगाउँछ।